Olona luhlu lweTV lubalaseleyo lwango-2018: ziyintoni kunye nezimvo zabo | Ndinike ixesha lokuphola
Ukusukela ukuqhuma kweqonga lokusasaza, sichanabeka kwisixa esikhulu somxholo ukusuka kuthotho olukwi-intanethi nakumabonwakude. Namhlanje baye baba sesinye sezona zilingo ziphambili kwaye kuya kusiba nzima ukukhetha isihloko apho uza kutyala iiyure zexesha lakho. Kukho amaqonga ahlukeneyo abandakanya umxholo womgangatho. INetflix, iAmazon Prime kunye neHBO zintathu zamaqonga aphambili olu hlobo lomxholo. Kule nqaku ndibonisa uluhlu kunye nesihlanu olona chungechunge lwe2018 nganye yazo. Kubandakanya iinqwelomoya!
Ukhetho lusekwe kumanqanaba ababukeli kuthotho olukhoyo kunye namaxesha abo ohlukeneyo.
1.1 1. Indlu yePhepha
1.2 2. ICarbon echaziweyo
1.3 3. Amantombazana eCable
1.4 4. Izizathu ezili-13 zokuba kutheni
1.5 5. I-Alienist
2.1 1. UGoliyati
2.2 2. Indoda kwiNqaba ePhakamileyo
2.3 3. Ecacileyo
2.4 4. Iimerika zaseMelika
3.1 1. Umdlalo weZihlalo zobukhosi
3.2 2. Ibali leSicakakazi
3.3 3. Amanga amakhulu amakhulu
3.4 4. Ukuchonga okwenyani
Lelona qonga lisetyenziswayo kwaye yaphehlelelwa ngo-2010. Iyabonwa njengeqonga lokuqala lokusasaza kunye nokuphehlelelwa okuyimpumelelo. Ifumaneka phantse kulo lonke ilizwe ngaphandle kwe China (ngaphandle kweHong Kong neMacao), iSyria neNorth Korea.
Olu luhlu ungaphoswa zizo zilandelayo:
1. Indlu yePhepha
Iyabonwa njengoluhlu oluphezulu olungathethi isiNgesi kwimbali yeNetflix. Amaziko omxholo kwi Ukuphanga iNational Mint kunye neStamp Factory, icwangciswe ngokungenakonakala "nguNjingalwazi." Iyafana edibanisa iqela lezaphuli mthetho ezikhethekileyo kwiindawo ezahlukeneyo. Inye enegama elingelolakho, sifumana iTokyo, iBerlin, iNairobi, iMoscow, iRio, iDenver kunye neHelsinki isongelwe kwisicwangciso esinokuthatha ukujika okungalindelekanga apho kuya kuba yimfuneko ukuphucula ukwenza iinjongo.
Sifumana abathinjwa, abathethathethwano, amapolisa kunye nenqwaba yezenzo eziza kukugcina emaphethelweni esihlalo sakho kude kube sekupheleni.
2. ICarbon echaziweyo
Kwixesha elizayo elizayo, uluntu luguqulwe ngokupheleleyo bubugcisa. Ukuze abantu abalahle inkolo babe nethuba lokudlula ixesha kunye nokungafi ngendlela ethile ngelixa ukumiliselwa okuqulathe lonke ulwazi lwenkumbulo kunye nesazela somntu ngamnye kugcinekile. Olu fakelo lubekwe kumqolo wentamo kwaye lufakelwe kwimizimba yabantu etshintshanayo kwaye isebenze "njengokugubungela".
Umlinganiswa ophambili nguTakeshi Kovacs, ulilungu lejoni elidlubulundayo elithengwayo kwaye "livukile" emva kweenkulungwane ngomnye wamadoda anamandla ukuba athunyelwe kwimishini ekhethekileyo. Umvuzo: inkululeko kunye nenhlanhla!
UKovacs uyavuma, uya emsebenzini, kwaye ufumanisa iinyani ezingalindelekanga ngobomi bakhe.
3. Amantombazana eCable
Misela kwii-20s, uthotho ubalisa ibali labahlobo abane abazana besebenza njengabaqhubi beefowuni kweyona nkampani ibaluleke kakhulu kunxibelelwano ngalo mzuzu eMadrid. Omnye wabalinganiswa abaphambili uziva ebambekile kwiintsapho ezahlukeneyo kunye nemiba yezentlalo. Bazinikezele ekophuleni iiparadigms ngokubhekisele kuluntu olulindele kubo.
Kwangelo xesha thanda unxantathu phakathi komntu ophambili, isithandwa sakhe sobuntwana kunye nomnini wenkampani. Kujikeleze bona kukho idrama engapheliyo egcwele ukudideka, uthando olunomdla kunye nokungcatsha. Ixesha lesibini linesiqalo esingalindelekanga esibeka inkululeko yabalinganiswa abasemngciphekweni kuba banokuzijonga njengabanobulali.
4. Izizathu ezili-13 zokuba kutheni
Ibali likaHanna Baker aligqitywanga ukuxelela, ixesha lesibini Imalunga nomthetho wabazali bakhe nxamnye neLiberty High. Ngexesha lokuvavanywa, iimfihlo ziyafunyanwa ezenza ukuba umntu ongaphaya koyedwa angcangcazele. Ngeli xesha lonyaka, izifinyezo zibonakala njengezixhobo zophando
Iziyobisi, ukuzibulala, isondo, ukusetyenziswa kwezixhobo kunye nokwabelana ngesondo kuyaqhubeka nokuba yimixholo ephambili kuthotho. Lungiselela isisu sakho ngeziqendu ezithile ezinemifanekiso eyomeleleyo.
Yinto eyonwabisayo yengqondo yeziqendu ezilishumi ezenza uthotho olubekwe kwinkulungwane ye-XNUMX eNew York kunye neenkwenkwezi uDakota Fanning, uDaniel Brühl noLuka Evans. Sifumene Isiko lokubulala owenza uninzi lokubulala ngokumasikizi. Umkomishinala uvula ityala eliphandwa ngokufihlakeleyo yintatheli, unobhala wesebe lamapolisa kunye nengcali yezengqondo. Elokugqibela laziwa ngokuba "ngumphambukeli" lifunda i-pathologies kunye nokuziphatha okutenxileyo kwabantu abangaphandle kwabo.
Iqonga eliphambili lokuthengisa kwi-Intanethi ligqibe kwelokuba landise ishishini lalo kwaye yazisa iNkulumbuso ngo-2017. Emva koko ndibonisa awona manqaku aphambili anokubonelelwa yiAmazon Prime Video:
Ibalisa ibali likaBilly Mcbride, a igqwetha eligxothwa yinkampani awanceda ukuyifumana. UBilly uba ngumntu okhuselayo kwaye awele etywaleni. Emva kwexesha uyamenywa ukuba ajoyine umlo osemthethweni ngokuchasene nefemu yakho endala kwaye unethuba lokuzikhulula. Ixesha lesibini liyamnyanzela ukuba asebenzise umthetho kwakhona ukunceda unyana womhlobo wakhe, otyholwa ngetyala lokubulala eliphindwe kabini. Ngexesha lesiza, isixeko saseLos Angeles sifumana iyelenqe elikhulu.
2. Indoda kwiNqaba ePhakamileyo
Unamaxesha amabini afumanekayo kwaye owesithathu uza kukhutshwa ngo-2018 Ubalisa imeko apho iMfazwe yesibini yeHlabathi ingazange iphumelele kwiiAllies. Cinga ngenyani eyahlukileyo kunehlabathi namhlanje apho iUnited States yahlulwe yangamacandelo alawulwa ngamaNazi namaJapan. UHitler wayiphumelela imfazwe!
Ngumdlalo weqonga waseMelika onebali elithetha Ukuguqulwa komntu oguqukayo ukuya kubantu abadala: Ubomi buba nguMaura Pfefferman. Eli bali libandakanya lonke usapho oluquka abantwana abathathu abazicingela bodwa kunye nowayesakuba ngumfazi.
Ukungafihli Olona lawulo lukhulu lweAmazon Prime: Uphumelele amabhaso ngothotho lwamahlaya olugqwesileyo kunye nomdlali weqonga ngexesha leeNdawo zeHlabathi zegolide ezingama-72. Ukuza kuthi ga ngoku, bekukho amaxesha amane, eyokuqala iqale ngo-2014.
4. Iimerika zaseMelika
UShadow Moon, isaphuli-mthetho esanda kukhululwa entolongweni kwaye sijamelene nokusweleka komfazi waso. Kwilizwe angaliqondiyo, udibana noMnu ngoLwesithathu omnika umsebenzi wokuba ngumncedisi kunye nomlindi. Umthunzi ukwelinye ilizwe elahlukileyo apho kukho umlingo kwaye sifumana oothixo abadala aboyikayo ukungabinanto ngenxa yetekhnoloji kunye noothixo abatsha.
UMarius uphuma entolongweni kwaye uzenza umntu awayevalelwe naye ogama linguPete. Uhlangana kwakhona nosapho lokwenyani lukaPete kwaye ufumanisa iingxaki ezinkulu ekufuneka naye ajongane nazo. Intsapho entsha ayifumani kwaye iyaqhubeka ne-charade.
Unikeza izihloko ze uthotho lwaseMelika Kwelijelo likamabonakude wentambo. Ukuphehlelelwa kwayo eSpain kwakungoNovemba 2016 ngentsebenziswano neVodafone kwaye ineendlela ezimbini elizweni:
HBO: Umxholo oqhelekileyo wabantwana, ulutsha kunye nabantu abadala abanomxholo obanzi woluhlu kunye neemovie zazo zonke iintlobo
HBO Usapho: Ibhekiswe ngqo kubaphulaphuli bolutsha. Umxholo ulungele yonke iminyaka
Ezintlanu zoluhlu lwe-2018 ezilungileyo kweli qonga zezi zikhankanywe ngezantsi:
1. Umdlalo weZihlalo zobukhosi
Lelinye lawona manqaku aphumeleleyo kule minyaka idlulileyo enamanqanaba aphezulu abaphulaphuli. Ngexesha lesibhozo ukuqala kwi-2019, sifumana ngonaphakade ulwe phakathi kweentsapho ezihloniphekileyo ukulawula izikumkani ezisixhenxe kwaye uthathe itrone yentsimbi. Amagama okugqibela uStark, uBaratheon, uLannister, uTargaryen, uGreyjoy, uTully kunye noAryn banabalinganiswa abanika uthotho uthotho olwahlukileyo noluyinyani. Ngokulandelayo, bonke bane-White Walkers njengeentshaba eziqhelekileyo. Ngokuqinisekileyo luthotho ongenakuphulukana nalo!
Ulixesha lokufika phambi kwenkulumbuso Ixesha lokugqibela ngo-2019.
2. Ibali leSicakakazi
Uthotho olutsha nolwamkelwayo lumalunga nebali lika-Offred, umfazi osebenza njengekhoboka lesini. Ibali liyavela kwi Intsomi kunye noluntu olungenabantu apho umfazi athathwa njengepropathi karhulumente. Bambalwa abantu ababhinqileyo abachumileyo, abanyanzelwa ukuba bakhonze iintsapho ezizizityebi kwaye ukuvelisa abantwana ukwandisa inani labemi. Umlinganiswa ophambili ulwela ukwahlukana nolawulo kwaye abuyise unyana othathiweyo kuye.
Ixesha lesibini livula ngoJulayi 2018 kwaye lithembisa ukuvelisa ukungqubana okungakumbi.
3. Amanga amakhulu amakhulu
Ngomlingisi omkhulu odlala phambili uNicole Kidman, uReese Whiterspoon kunye noShailene Woodley, ibali ligxile Oomama abathathu ababonakala begqibelele. Ukuguqula amanyundululu entlalontle kuyabonakala kwaye abalinganiswa abaphambili banxulumene kwi uphando lokubulala.
Olu luhlu lwalucwangcisiwe njengothotho lwe-mini kwaye lwatshayela amabhaso ombutho ngo-2017. Olu luhlu lwadunyiswa kangangokuba ixesha lesibini uMeryl Streep azokujoyina lisemisebenzini.
4. Ukuchonga okwenyani
Yapapashwa ngo-2014, uMcuphi oyinyani uneempawu ze- Ibali lophando lwamapolisa kunye nabadlali abazimeleyo kwisizini nganye. Isakhiwo ngasinye sijikeleza amatyala okubulala: Ixesha loku-1 laphefumlelwa ngumbulali obulalayo owazingelwa iminyaka eli-17, ngelixa ixesha lesibini lalisekwe ekubulaweni ngusopolitiki owonakeleyo waseCalifornia.
Nge-Agasti ka-2017, ixesha lesithathu labhengezwa kwaye alikaveliswa.
IWestworld yi Ipaki yolonwabo yexesha elizayo eqhutywa yimikhosi ethile: iirobhothi. Injongo yale paki yile yenza nayiphi na into enomdla kwindwendwe ngokusebenzisa ulwazi olungelulo olwenziweyo ngaphakathi kwendalo yaseMelika yaseNtshona. Ababhenkethi banokwenza nayiphi na into emnandi, kubandakanya nezinto ezingekho mthethweni ezinje ngokubulala kunye nokudlwengula.
Olu luhlu lunamaxesha amabini kwaye lubandakanya u-Anthony Hopkins phakathi kwabadlali, kunye no-Evan Rachel Wood kunye no-Ed Harris.
Njengoko uza kubona, sele unayo Izihloko ezili-15 ezichazwe njengempumelelo ngo-2018 kwaye ukhetho lwayo luluhlobo olwahlukileyo. Ngoku ewe! Nandipha ezi iiyure zilandelayo ngesiqinisekiso sokuba ukhetho lwakho luya kufaneleka.
Ngoku, ukuba sele ulubonile lonke uthotho okanye ufuna ezinye iindlela, unokujonga kwiikhathalogu zamanye amaqonga okusasaza anje Movistar +, Rakuten TV, Filmin, YouTube TV okanye Hulu. Siyathemba ukuba uluthandile olu luhlu lweyona TV ibalaseleyo kulo nyaka!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Uthotho lweTV olugqwesileyo ngo-2018